Madaxwaynihii hore Shariif oo Koow ka noqday Mucaaradka Xukuumadda Xassan Sheikh iyo isaga oo ku biiray Siyaasiyiinta Qaswadayaasha. (Warbixin Xasaasi ah) | warsugansomaliya.wordpress.com
Madaxweynihii hore ee Somalia Md. Shariif Sheikh Axmed, ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ku biiray Shaqsiyaadka Qaswadayaasha ee kasoo horjeeda Xukuumadda Somalia.
Shariif Sheikh Axmed oo deegan iyo waxbarasho u jooga Dalka Maraykanka ayaa waxa uu dhawaan Magaallada Kampala u imaaday Shir dalkaasi ka dhacaayay oo u dhexeeyay Mas’uuliyiin uu kamid yahay Cali Maxamed Geedi oo iyagu isku aruursaday inay jilbaha dhulka u dhigaan Xukuumadda Somalia ee uu Hoggaanka u haayo Xassan Sheikh Maxamuud.
Kulanka uu Shariif Sheikh Axmed Magaalladda Kampala kula qaatay Shaqsiyaadkaasi Mucaaradka ayaa waxa uu ku shaaciyay inuu qeyb ka yahay Guddi isku magacaabay (Badbaadinta Qaranka Somalia) oo dhawaan looga dhawaaqay Magaalladda Nairobi.
Shariif Sheikh Axmed, ayaa waxaa Guddigaasi ku wehliya Mas’uuliyiin ay kamid yihiin Cali Maxamed Geedi, Cumar Cabdirashid Cali Sharma’arke, C/wali Cali Gaas, Baadiyow iyo Cali Khaliif Galeyr, oo intuba ah Mucaarad ka soo horjeeda Xukuumadda Madaxweyne Xassan Sheikh Maxamuud.
Illo-diplomaasiyeed ka tirsan Guddiga ayaa shabakadda Allbanaadir u xaqiijiyay in Guddiga Nairobi looga dhawaaqay uu qeyb ka yahay guddi lagu magacaabay ‘’ Golaha wada tashiga iyo toosinta Somaliland’’ oo dhawaan looga dhawaaqay Magaalladda Hargeysa kaasoo ay ku mideysan yihiin Tiro mucaarad ah oo uu kamid yahay Eng. Faisal Cali Waraabe.
Ugu dambeyntii, Guddiga Badbaadinta Qaranka Somalia ayaa la filaaya inay laba Xarun ka furtaan Magaalladda Kampala iyo Nairobi, iyaga oona Taageero lixaad leh ka helaayo labadaasi dal ee kala ah Kenya, Ugandha.
← Qarax Khasaara geystay oo gowr dhow ka dhacay Magaalladda Kismaayo. (Warbixin Muhiim ah).
Qaramada Midoobay oo soo bandhigtay Dad lagu eedeeyay in ay amaan Daro ka wadaan Muqdisho(Aqriso Magacyada →